Ungawuqalisa njani ngokukhawuleza uMkhankaso oSekwe kwimozulu ongenazo iZakhono zokuKhowuda | Martech Zone
Emva kwentengiso yangoLwesihlanu oMnyama, uthengeko lweKrisimesi lokuthenga, kunye nokuthengisa emva kweKrisimesi sizifumana sikwixesha elithandekayo lokuthengisa lonyaka kwakhona-kuyabanda, kungwevu, kuyana, kwaye kuyakhithika. Abantu bahleli emakhaya, endaweni yokuhambahamba kwiivenkile ezinkulu.
Isifundo se-2010 yingcali yezoqoqosho, u-Kyle B. Murray, utyhile ukuba ukukhanya elangeni kunokonyusa ukusetyenziswa kunye nethuba lokuchitha. Kwangokunjalo, xa kusibekele kwaye kubanda, amathuba ethu okuchitha ayancipha. Ngapha koko, kumazwe amaninzi, iivenkile zokutyela, iindawo zentselo, kunye neevenkile ezinkulu ziyavalwa ngenxa yezithintelo zikarhulumente. Lilonke, uqikelelo alukhangeleki luthembisa kakhulu.
Ungayinyusa njani intengiso yakho kwixesha lasebusika elingwevu nelidikayo ngo-2021? Isicwangciso esiliqili esihle kukuba, ingakumbi kwiintsuku zemozulu ezimbi, ukukhuthaza abaphulaphuli bakho ukuba bathenge ngemiyalezo eyenzelwe wena, umxholo. Ngeentsuku ezibandayo, zasebusika, unokwazisa ngemikhankaso esekwe kwimozulu eya kuthi inike inkuthazo kubathengi bakho ukuba babakhuthaze ukuba basebenzise ngaphezulu- nantoni na evela kwikhowudi yekhuphoni, ukuhanjiswa simahla, ifreeebie kwikhadi lesipho okanye amanqaku ongezelelweyo okunyaniseka afunyenwe emva kokubeka umyalelo. Izandi zigqibelele, kodwa ujolise njani kwabo bathengi abanesimo sezulu esihlangabezana neemeko ezithile?
Yintoni ukuThengisa ngeMozulu
Ukuthengisa imo yezulu (kunye nentengiso esekwe kwimozulu okanye ukuthengisa okubangelwa yimozulu) sisixhobo esinamandla sokuthengisa esisebenzisa idatha yemozulu yexesha lokwenyani ukwenza intengiso kunye nokwenza imiyalezo yokuthengisa ibhekise kwimozulu yendawo.
Ingabonakala inzima kwaye ichitha ixesha ukumilisela iphulo elisekwe kwimozulu kodwa ngethamsanqa i-SaaS, izisombululo zokuqala ze-API zinokuhambisa ngokukhawuleza-kwintengiso kunye nezisombululo zebhajethi ephantsi yamashishini amancinci naphakathi.
Ukunceda amashishini kobu busika, thina, e Qinisekisa, Ndilungiselele ityala lokusebenzisa kunye nesifundo somkhankaso wentengiso wekhowudi esezantsi wokukhuthaza. Sijolise kwizimo ezinokuseta ngaphakathi kwiintsuku ezimbalwa ukukuvumela ukuba uyisebenzise ngeli xesha lonyaka. Senze uvavanyo kwaye saseta zombini, ikhuphoni elisekwe kwimozulu kunye nakwikhadi lesipho, sisebenzisa ikhowudi encinci, kusetyenziswa amaqonga amahlanu e-API. Ukuseta kuthathe iiyure ezimbalwa, kubandakanya inyathelo lokucinga. Sasifuna kuphela ukufaka ikhowudi kwifom pop-up eqokelela ii-imeyile kunye nokwabelana nge-IP-based geolocation yomsebenzisi kodwa ukuba unayo loo fomu ngaphandle kwebhokisi kwiqonga lakho le-CMS, ungatsiba elo nyathelo.
Ukuseta amaphulo, uya kudinga la maqonga alandelayo:
Indawo yeWebhu ye-API
Zapier <> Imozulu yeAeris -Zenzekelayo i-API
Icandelo Iplatifomu yeDatha yaBathengi
Qinisekisa Isoftware yoLawulo loKwazisa
Ibhrashi -Ntengiso ye-imeyile
Twilio -Ntengiso yeFowuni
Zonke ezi zixhobo zinesilingo sasimahla esifumaneka ngoJanuwari 2020, ke unokuzama ukuseta ngaphambi kokuzibophelela kulo naluphi na urhumo.
Senze iimeko ezimbini zomkhankaso- enye yeenkampani zasekhaya kunye nezinye ezamashishini ehlabathi. Nalu ushwankathelo olufutshane lwento onokuyicwangcisa kwiiyure ezimbalwa usebenzisa izixhobo ezichazwe ngaphambili kwaye ngawaphi amanyathelo ekufuneka uwalandele ukuseta konke:
Umzekelo 1: I-Café yaseBerlin-Iphulo leMozulu laseKhaya
Eli liphulo lokwazisa ngendawo yokutyela eBerlin. Ekuqaleni kwexesha lasebusika, abasebenzisi bafumana iikhowudi ezimbini zokwazisa ngomyalezo obhaliweyo abanokuwusebenzisa kuphela xa kukho ikhephu (ikhowudi yokuqala iyasebenza ukuba iqondo lobushushu lingaphezulu kwe -15 ° C, elinye ukuba iqondo lobushushu lingaphantsi kwe -15 ° C). Amatikiti akhubazekile okanye anikwe amandla mihla le ngokuzenzekelayo, ngokusekwe kuqikelelo lwemozulu lweBerlin esijonga yonke imihla nge-7 AM nge-automation yeZapier. Amatikiti anokuhlawulelwa kube kanye kumthengi ngamnye.
Nantsi ingcinga yokunyusa:
Ukuba kukho ikhephu eBerlin, vumela i-20% yekhuphoni yoluntu.
Ukuba kukho ikhephu kwaye iqondo lobushushu lehle ngezantsi -15 ° C eBerlin, vumela i-50% yekhuphoni yoluntu.
Ukuba akukho khephu, khubaza zombini ezi zinto zibonelelweyo.
Kukuhamba okuza kusetyenziswa leli phulo:
La manyathelo kuya kufuneka uwalandele ukuseta:
Ngenisa isiseko sakho sabathengi kwiVoucherify (qinisekisa ukuba iiprofayili zabathengi zibandakanya indawo kunye nenombolo yefowuni).
Yakha icandelo labathengi abavela eBerlin.
Yenza iikhowudi ezimbini ezizimeleyo ze -20% kunye -50% kunye nephethini yekhowudi eyenziwe.
Yabelana ngeekhowudi nabathengi ngeSMS ngokudityaniswa kweTwilio. Umyalezo ongumzekelo ungabonakala ngoluhlobo:
Yiya eZapier kwaye wakhe unxibelelwano kunye neAerisWeather.
Ngaphakathi kokuhamba kweZapier, cela iAerisWeather ukuba ijonge imozulu eBerlin yonke imihla nge-7 AM.
Cwangcisa ukuhamba okulandelayo kweZapier:
Ukuba iimeko zemozulu ziyafezekiswa, uZapier uthumela isicelo se-POST kwiVoucherify ukwenza iivawutsha.
Ukuba iimeko zemozulu azifezekiswa, uZapier uthumela isicelo se-POST kwiivawutsha ukukhubaza iivawutsha.
Umzekelo 2: Iphulo leMozulu loMhlaba kwiVenkile yeKhofi ekwi-Intanethi-Yiyeke ikhephu
Eli phulo lenzelwe iinkampani zehlabathi ezinabasebenzisi abasasazeke kwiindawo ezahlukeneyo. Ngale ndlela, unokujolisa kubasebenzisi abavela kwizixeko ezahlukeneyo kunye namazwe ngokusekwe kwiimeko zemozulu zabo.
Ukuba kuyakhithika, abasebenzisi baya kufumana ikhuphoni ye-thermos yasimahla, enokuhlawulelwa ukuba iodolo yabo ingaphezulu kwe- $ 50.
Ukuba kukho ikhephu kwaye iqondo lobushushu lingaphantsi kwe -15 ° C, abasebenzisi baya kufumana i-40 $ ikhadi lesipho elisebenzayo kwii-odolo ezingaphezulu kwe-100 $.
Ukuhlawulelwa kube kanye kumthengi ngamnye.
Ukusebenza kweKhuphoni kwiintsuku ezisixhenxe emva kokupapashwa.
Ukusebenza kwekhadi lesipho ngexesha lephulo (kwimeko yethu, ukusuka nge-01/09/2020 ukuya kwi-31/12/2020).
Uhambo lomsebenzisi kweli phulo liza kubonakala ngathi:
Intengiso (umzekelo, uGoogle okanye intengiso kuFacebook) ikhokelela kwiphepha lokufika kunye nefom ekufuneka uyigcwalisile. Kule fomu, undwendwe kufuneka lwenze ukuba kwabelane ngendawo kwaye lufake iidilesi ze-imeyile ukuze luthathe inxaxheba kwiphulo elisekwe kwimozulu.
Ukuba umsebenzisi, kwindawo yabo (ebonelelwe ngumkhangeli), ngelixesha lokugcwalisa le fomu, uneemeko zemozulu ezichaziweyo kwiphulo, baya kufumana isigqebhezana okanye ikhadi lesipho ngokwahlukeneyo.
Amatikiti okanye amakhadi ezipho aya kusiwa kubasebenzisi abaqeqeshiweyo ngokuhambisa i-imeyile ngeBraze. Iikhuphoni / amakhadi ezipho aya kuqinisekiswa ngokuchasene nemigaqo yephulo (yiVoucherify), kwaye kuphela abathengi abaya kuthi banelise iikhrayitheriya ezibekiweyo ziya kuba nako ukuzikhulula.
Iza kusebenza njani ngokwembono yezobuchwephesha?
Umsebenzisi uza kwifayile ye- iphepha lokufika kwaye ugcwalisa le fomu ukuze babelane nge-imeyile kunye nolwazi lwendawo nge- isikhangeli se-API.
Le fomu ithumela idatha yomthengi nge-webhook kuZapier:
UZapier uthumela idatha kwiCandelo.
Icandelo lithumela idatha kwi-Braze kunye neVoucherify.
UZapier ubuza iAerisWeather malunga nemozulu yendawo yomsebenzisi, ngokusekwe kulwazi lweendawo. Zimbini iindlela ezinokuthi zilandelwe nguZapier:
Ukuba kukho ikhephu kwaye iqondo lobushushu lingaphantsi kwe -15 ° C, ke:
I-Zapier icela iVoucherify yokuhlaziya umthengi owenziwe ngaphambili kunye nemethadatha: isCold: true, isSnow: yinyani.
Ukuhanjiswa kwamakhadi ezipho kwamakhadi ezipho ngokuzenzekelayo, kubangelwa xa umthengi engena kwicandelo elifanelekileyo. Icandelo liya kuqokelela abathengi abahlangabezana neemfuno ezimbini zemethadatha yiCold: yinyani kwaye ISnow: yinyani.
Ukuba kwindawo yomsebenzisi kuyakhithika, kwaye iqondo lobushushu lingaphezulu kwe -15 ° C, emva koko:
I-Zapier icela iVoucherify yokuhlaziya umthengi ngemethadatha: isCold: false, isSnow: true.
Ukuhanjiswa kweekhowudi zasimahla ze-thermos ngokuzenzekelayo, kubangelwa xa umthengi engena kwicandelo elifanelekileyo. Icandelo liya kuqokelela abathengi abahlangabezana neemfuno ezimbini zemethadatha yiCold: bubuxoki KANYE yiSnow: yinyani.
Nalu ushwankathelo lwamanyathelo oya kuwathatha ukuseta eli phulo:
Yenza imethadatha yomthengi kwiVoucherify.
Yakha amacandelo abathengi kwiVoucherify.
Cwangcisa imikhankaso emibini-amatikiti akhethekileyo kunye namakhadi ezipho kwiVoucherify.
Lungiselela ukuhanjiswa okuzenzekelayo ngeBraze usebenzisa iiMpawu zeMpawu eziCwangcisiweyo.
Yenza iphepha lokufika kunye nefom yokuqokelela ulwazi lwabathengi kunye neqhosha lokuvumela ukwabelana ngendawo. (apha unokufuna umphuhlisi akuncede ukuba awunazo iifom ngaphandle kwebhokisi kwiqonga lakho le-e-commerce / CMS).
Cwangcisa ukudityaniswa kwecandelo ukubamba idatha evela kwifom kwaye uyithumele kwiBraze kunye neVoucherify.
Yiya eZapier kwaye wenze iZap ngeAerisWeather, iCandelo, kunye neVoucherify plug-ins.
Unokwenza ngokukhululekileyo ulungelelwaniso lokuhlangabezana neenjongo zethu zeshishini ezizodwa. Ukuhamba okungasentla kusekwe ekuqinisekiseni iimeko zemozulu xa abathengi begcwalisa ifom kwiphepha lokufika. Ungalutshintsha olu hambo ukuze iimeko zemozulu zijongwe ngalo mzuzu wentlawulelo yenkuthazo kwivenkile yakho. Kolu hlobo lwephulo, bonke abathengi baya kufumana isithembiso kodwa siya kusetyenziswa kuphela kwiimeko ezichaziweyo zemozulu. Kukuwe ukuba zihamba phi na iimfuno zakho ngcono.
Zombini ezo zikhuselo zilula ukuseta kwaye zisebenzise izisombululo zokuqala ze-API ezinikezela ngezilingo zasimahla. Ungaziseta ngokwakho, uvule iintsuku ezimbalwa kwaye ubone iziphumo, ngaphambi kokuzibophelela kwimirhumo ehlawulelweyo. Ukuba ufuna ukuseta, ungasifunda isikhokelo esipheleleyo ngesikrini kunye nemiyalelo yamanyathelo ngamanyathelo kuzo zombini iimeko zephulo Voucherify.io 200 OK imagazini.
La maphulo mabini ayimeko enye yokusebenzisa la maqonga akhankanywe apha ngasentla. Zininzi ezinye, ukukhutshwa ngaphandle kwebhokisi onokuzakha usebenzisa ezi kunye / okanye ezinye iiplatifomu zokuqala ze-API.
I-Voucherify yinkqubo yokuKhuthaza yokuQala yokuQala ye-API yamaQela eDijithali exhobisa amaqela ezentengiso ukuba asungule ikhuphoni yomxholo, ukuhanjiswa, isaphulelo, ukunikezelwa kunye nemikhankaso yokunyaniseka ngokukhawuleza.
tags: Imozulu yomoya opholileyoApiIbhrashiengenakhowudigeolocationcandeloTwilioqinisekisayemozuluintengiso yemozuluimo yezuluzapper